.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: I Love You ..[ New Album ]
I Love You ..[ New Album ]
ဒီ Album လေးကို February 14 ရက် ချစ်သူများနေ့မှာ ကျွန်တော့်ချစ်သူကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတော့
လုပ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူနားထောင်ချင်တယ် ဆိုတာနဲ့ အရင်ရက်တွေကတည်းက ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်
အပျင်းထူတာနဲ့ ရောပြီးတော့ အဟီး..။အပြီးတောင် အချော မသတ်ရသေးပါဘူး။ February 14 အတွက် Album ဒီဇိုင်း
အသစ်တစ်ခု ထပ်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် ဒီ Album လေးကို သူငယ်ချင်းတွေ နားထောင်လို့ ရအောင်
ကိုယ့်ချစ်သူတွေ ဘာတွေ ရှိရင်လည်း ဆက်ဆောင်ပေးလို့ ရအောင်ဆိုပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Album နားဆင်ရန် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပါ။ Album ဒေါင်းရန် >> ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပါ။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
Posted by Thurainlin at 20:44
Labels: Flash Song Album, Mp3